Kungani Ukuxhumana Kwemizwa Kuzoba Ukhiye Empumelelweni Yokuthengisa Yale Sikhathi Samaholide | Martech Zone
Isikhathi esingaphezu konyaka, abathengisi bebelokhu bebhekene nomthelela walolu bhubhane ekuthengiseni futhi kubukeka sengathi imakethe izobhekana nenye inkathi yokuthenga ngamaholide eyinselele ngonyaka ka-2021. ngokwethembekile esitokweni. Izimiso zokuphepha ziyaqhubeka nokuvimbela amakhasimende ekwenzeni ukuvakasha esitolo. Futhi ukushoda kwezisebenzi kushiya izitolo zinyakaza uma kuziwa ekuhlinzekeni abathengi abawela umgwaqo. Akukho kulokhu okuyizindaba ezimnandi noma eziqhakazile zamathemba okuthengisa ngesikhathi samaholide.
Ngaphandle kwesibikezelo esidabukisayo, kube nokuthuthuka okuningana kusipiliyoni sokuthenga. Iningi labathengi lijabulele izinto ezizalwa ubhadane ezifana nokuthathwa kwe-curbside, izinkokhelo ezingathintwa, kanye nokulethwa kosuku olufanayo. Lezi zici zisebenza kahle ngoba amakhasimende asabela kahle kuzo. Lapho umthengisi ezimisele ukwenza izinguquko futhi asebenze nabathengi ukwenza isipiliyoni sokuthengisa esingaqinisekile sibe ngcono futhi silawuleke, wonke umuntu uyaphumelela. Kule ndawo yokuthengisa, lolo hlobo lokuguquguquka luphakamisa ukuthi kuzwela kwabathengi, hhayi amanani aphansi kakhulu, angagcina ethengisile.
Ukuzwela kwekhasimende akuyona into entsha. Eqinisweni, amaphesenti angama-80 abathengi asekela izinqumo zabo zokuthenga okuthengisa emizweni.
I-Deloitte, Iveza ukubaluleka kokuzibandakanya okuqhutshwa imizwa
Indlela abazizwa ngayo ngomkhiqizo noma isevisi, ukuthi yethulwa kanjani kubo, kanye nemizwa yabo ngomthengisi oyinikezayo. Ukwenza ukuxhumana namakhasimende bekulokhu kuyisithako esibalulekile ekuthengisweni, kepha ngezikhathi ezinzima kakhulu ezifana nalezi, uzwela nokwakha ukuxhumana okuhle ngokomzwelo namakhasimende kunganikeza isitolo sakho umngcele wokuncintisana osidingayo.
Sesibonile kakade okulandelayo-gen uzwela lufaka phakathi ukuxubana nokuvela kwezingxoxo zokuxoxa eziku-inthanethi, uhlu lwezincomo, nabasizi bezinto ezibonakalayo. Ubuhlakani bokwenziwa kanye nokwenza okuzenzakalelayo kwemisebenzi yesevisi yekhasimende ephindaphindayo kuthuthukise ukuzizwisa ku-inthanethi ngokuqinisekile, kodwa ububanzi bokusebenza kwabo ngokuvamile bukhawulelwe ezinkingeni ezivamile, okulula ukuziphendulela. Amandla abo okushukumisa nokuvala okuthengisiwe abe semikhawulweni kuphela. Kubukeka sengathi izingxoxo zokuxoxa zilungile ekufundeni imibhalo kepha okwamanje azinalo iqiniso umlingisi lokho kuzobenza bathandeke ngokwengeziwe - ezingeni lomzwelo, okungenani.
Sekushiwo lokho, enye indawo lapho uzwela lubonakala lusebenza kahle ikuyo commerce bukhoma, isipiliyoni sokuthenga lapho ulwazi lomkhiqizo nobungani bomlingani wendabuko wokuthengisa uhlangabezana khona nokuthenga okuku-inthanethi. Inkampani engayisungula, I-GetBEE, inika amandla imikhiqizo ukuhlinzeka izivakashi zesayithi le-ecommerce ngezinsizakalo ezibukhoma, zenhlalo, zezitolo zezitolo - ngochwepheshe wangempela womkhiqizo. Futhi, ngenxa yalokhu kusebenzisana okwenziwe ngabantu, sibona izinhlobo zemikhiqizo ezinesilinganiso sokuguqulwa sokuthengisa esingu-25%. Lokho kusebenza ngempumelelo emangalisayo uma kuqhathaniswa namanani ejwayelekile we-1 no-2% atholakala kumasayithi amaningi we-e-commerce.
Ngenkathi ukuchofoza okukodwa kokuthenga kanye nezitolo zokuzithengela kunikeza usizo lokuzenzakalela, abathengi basaphuthelwa iseluleko neseluleko esiza nozakwethu onolwazi. Lokho kuthintwa komuntu bekulahlekile ekuhlangenwe nakho kokuthenga okuku-inthanethi, kepha ngenxa ye-5G nokwandiswa komkhawulokudonsa, manje kungenzeka ukwenza ukubonisana kwamavidiyo abukhoma kudivayisi ephathekayo yekhasimende futhi uzihambise ngezici zomkhiqizo.
Laba oxhumana nabo ocingweni, abathengisa online bakha ukuxhumana okungokomzwelo nabathengi abaku-inthanethi. Baguqulela amathuba okuthengisa futhi basebenzise namaqhinga aqinile okuthengisa. Ngaphezu nje komkhiqizo noma amanani entengo, ukubandakanyeka komuntu ngamunye amakhasimende amaningi akutholayo ukwengeza inani okusha kulwazi lwabo lokuthenga. Lokhu kubuza lo mbuzo, uma umuntu oncintisana naye ekwazi ukunikeza lolu hlobo lohambo lokuthengisa ngokomzwelo, kungenzeka yini ukuthi akhethe amakhasimende akho amaningi kule sizini samaholide?
I-GetBEE Esizwa Ukuthenga Okuhlangenwe nakho
'Lesi yisikhathi sokwenza ngezifiso isipiliyoni sokuthenga kumakhasimende akho. Induduzo nemizwelo kuyingxenye enkulu yempumelelo yokuthengisa, kusibekele izisekelo zangaphambilini ezifana nentengo nokwethembeka komkhiqizo. Okuxakayo ukuthi abahlanganyeli bezitolo bebelokhu besaba ukuthi ubuchwepheshe bungase buthathe indawo yabo. Iqiniso ukuthi, ubuchwepheshe busizile ukwakha ubunikazi obufanele nobufanele kozakwabo, futhi kuzothokozisa ukubona ukuthi indima iguquka kanjani njengoba ezentengiselwano ezibukhoma zikhula zithandwa kulokhu okusha umnotho wobudlelwano.
Bhuka i-GetBee Demo
Tags: 5gezokuhweba ngekhompyuthaimizweloukuthenga ngokomzweloukuthenga ngokomzwelogetbeeukuthenga ngokuchofoza okukodwaabangane be-online salesukuthengwa kwe-inthanethiumsizi wokuthenga onlineukuzihlolashopping
UThera C. Myhrvold
U-Thea C. Myrhvold ungumsunguli no-CEO owaziwa emhlabeni wonke we-GETBee, inkundla yokwabelana ngolwazi ye-B2B eklanyelwe ukuthuthukisa ukuzizwisa kokuthenga kwabathengi nokuguqula ikusasa lomsebenzi. Ngerekhodi lokufeza okuhle kwezobuchwepheshe kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha iminyaka engaphezu kwengu-10, waziwa ngobuholi obuqinile namakhono wokuxhumana anekhono elingokwemvelo lokwakha nokukala ukuqala kobuchwepheshe.
Kuyethusa… Isilinganiso Sabalandeli Be-Halloween Bahlela Ukuchitha Ngaphezu Kwama- $ 100 Kulo nyaka!